Nyoro neMusoja WeMazizamu paKadoma – Part 1 | Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Nyoro neMusoja WeMazizamu paKadoma – Part 1
Nyoro neMusoja Wemazizamu paKadoma – Part 1. Kamukadzi kaMusoja kaive nebeche rinonaka nemazizamu mahombe. Ndakaziva kuti ndapinda machena paakasekerera achimisa mota yangu paSuri Suri turn off takananga Kadoma. Ndayienda Gweru ndikati handina mutemo wekusiya mbutu munzira. Ndakatsika mabrakes ndaona kuti mucurves aivepo and anga akahwanda mukati meuniform yake yechisoja.
Ndaive nemeeting Monday morning kuGweru saka plan was ndofamba Saturday kudai ndoswera Sunday muGweru ndobata meeting early kuseni kweMonday but pandakaona musoja uyu ndakaita imwe pfungwa. Ndakamubvunza zita rake akapindura achisekerera achiti anonzi Maggie…
Takataura hedu zvinyoro nyoro ndichiro Jeep yebasa ndakananga Kadoma, suit yandaiva nayo yakandipa mamarks, ndakaona baby achindiyeva ndikati apa ndapinda. Akabvunza kwandinogara ndikamuudza kuti ndaigara kuHarare and was on my way to Gweru. I explained that i was not in a hurry and had meeting Monday.
Akanditi “saka kusvika Monday munenge muchiitei” Ndakatsanangura kuti i would be resting hangu ndichimboona night life yemuGweru. Akaseka achiti “dai ndaikuzivai mushe ndaenda nemi, i am new muKadoma saka my weekends are boring” Ndakati hazvinetse baby i can make it even better for you.
Takasvika pa Rainbow Hotel MuKadoma ndokupinda ipapo and akanditarisa achiseka. Ndakaparker ndokunanga kuReception and booked a room. I loved their weekend specials $50 per room. Not very sure if they still charge that but it was a good saving for me.
Maggie akanditi “saka whats the plan” I told her i would take her home to change and she can come chill with me after that kusvika Sunday manheru ndakumhanya kuMeeting. Mwana wevanhu akasekerera ndokuti OK.
Ndakaziva kuti Musoja uyu ndewangu and ndaida kumuratidza inonzi LOVE ne mboro! Takaenda kunonzi kuWestview extension and takasvika pamwe pamba and she went in ndokubuda achinja ave kaSexy Babe chaiko. Anga akapfeka kamini makumbo ese ari panze. Anga ane katight top ndipo pandakaona kuti mwana aive nezamu iyeye.
Ndakasekerera ndichimuona ndikamhanya kunomuvhirira door anga ane imwe high heel inenge yemuTV mwana anga akachena holding a matching hand bag. Ndakasekerera ndikati nhasi ndapinda. Makumbo ake anga akaita tan ndikaziva kuti apa ndogona kufa asi ndarova nyoro chete!
Takananga Kadoma Hotel and Conference Centre or kuRanch Motel as it is popularly known in Kadoma ndokusvika ndokunanga kuPool Area and ordered lunch hedu. Ndakatarisa baby ndikanzwa mboro ichimira ka1 iye aibva asekerera kunge arikuziva kuti arikundiuraya nenyere.
Takapedza kudya hedu ndokunanga kuroom and ndokugara hedu pabed tichitaura. Mwana wevanhu aindiuraya neSmile. Ndakaziva kuti apandichasvira paakanditi “are you going to keep looking at me or you gonna ki ss me?”
Handina kumirira kubvunzwa kaviri ndakasimuka ndokukisser baby and iye akabatirira and ndakananga straight kumazizamu ndipo pandakaziva kuti zamu mwana anga anaro shuwa kwete zveFake. Ndakavhura mabuttons eTOP ndokusimudza bra ndichiisa nyatso mukanwa. Ndakaona tan yekayellow bone aka ndikapa thanks to the God Almighty for this creation.
Ndakaramba ndichikisser rimwe ruoko richipinda mumini skirt ndichinanga kubeche straight. Ndakavhunduka ndichibata beche straight kureva kuti the whole time kababy kanga kasina panty. Ndakanzwa beche rakutoerera nekutota. I tried to think kuti panty yabviswa nguvai but it didn’t matter right about now.
Ndakaisa 1 chigunwe mukati and chakasvetwa ka1 nematinji. Handina kumira kuyamwa zamu. Ndakaisa chigunwe chechi 2 and pasina time anga oyuwira. Ndakamurarisa paBed ndokurova nyini ka1 pasina kana kufema. Ndakapinza mboro yese easy and ndakamurova ndichiyamwa zamu zvine power.
Maggie aive nekanyini kari very tight zvekuti dai asina kutota ndingadai ndakatunda ipapo. Ndakamurova kusvika mwana anakirwa, ndakapa kutenda ndanakirwa nebeche. Musoja ainaka iyeye and ndaisada kana kutunda ndaida kurova kusvikira mangwana.
Previous articleBamunini vakandizvambura nyoro kupfuura zvandinoitwa nemurume wangu!
Next articleNdakangomuti ndirikuda kuiswawo ndawona kukura kwechombo chake!